TVM Fandaharana Kao-dalina: Nitsoaka mantanjaka ny minisitry ny fampianarana
Notanterahina tamin'ny alarobia 25 jolay ny fakana sary sy feo ny fandaharana Kao-dalina, izay notontosain'ny TVM, ka nifanatrehan'i Minisitry ny fanabeazana Horace Gatien tamin'ny solontenan'ny Sendika n'ny mpampianatra roa.
Mafimafy ny fifandonana ara-kevitra nandritra ny fandaharana. Nitsoaka matanjaka ingahy minisitra, fa tsy nanaiky izay fampandriana adrisa sy fandrahonana ary amboletra ireto solontenan'ny mpampianatra ireto.
Tokony ny zoma 27 jolay no nalefa ny fandaharana, akory ny agagana anefa fa niantso ireo sendikan'ny mpampianatra ny TVM fa simba ny feo, ka haverina ny fandaharana. Ny filohan'ny Sendika Arsène Ratolojanahary anefa efa tsy eto an-toerana, ary nahoana no niandry roa andro be izao vao hilaza hoe simba ny feo? tsy matihanina ve izany ny teknisianina nandray feo?
Ary nahoana no nilazana ny mpijery TVM fa noho ny antony tsy miankina aminy no tsy nadefasana ny fandaharana, ny resaka teknika tsy misy feo ve, ka tsy antony miankina aminy.
Mazava fa nijery mialoha ny fandaharana ny minisitra sy ny mpitondra, dia nanao teny midina tamin'ny tompon'andraikitry ny TVM tsy handefa ilay fandaharana.
Resabe ataon'ity governemanta Ntsay ity izany, ny hoe fahalalahana hamoaka hevitra, fa dia mitovy amin'ireo mpanao politka nanolotra azy sy nanendry azy miaraka amin'ireo mpikambana ao amin'ny governemanta notambazana seza ihany izy, ka dia manadino ny lokaloka natao teny ankianja.